आज रातिदेखि मौन अवधि लागू हुँदै : के गर्न पाइन्छ, के-के पाइँदैन ? - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS आज रातिदेखि मौन अवधि लागू हुँदै : के गर्न पाइन्छ, के-के पाइँदैन ?
आज रातिदेखि मौन अवधि लागू हुँदै : के गर्न पाइन्छ, के-के पाइँदैन ?
काठमाडौं । वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज मंगलबार रातिदेखि मौन अवधि लागू हुँदैछ ।